पाल्पामा तीनजना उत्कृष्ट कृषक पुरस्कृत – www.janabato.com
पाल्पामा तीनजना उत्कृष्ट कृषक पुरस्कृत
८ असार २०७५, शुक्रबार १०:०५ June 22, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
रासस/पाल्पा -निस्दी गाउँपालिकाका तीन जना कृषकलाई उत्कृष्ट कृषक पुरस्कृत गरिएको छ ।
गाउँपालिकाभित्रका तीन जना उत्कृष्ट व्यावसायिक कृषक निस्दी गाउँपालिका कृषि शाखाद्धारा बिहीबार सम्मानित भएका हुन् । पुरस्कृत हुने कृषकमा निस्दी–२ सहलकोटका यमबहादुर मश्राङ्गी, निस्दी–५ गल्धाका शेरबहादुर सोती र निस्दी–७ ज्यामिरेका नरवीर दर्लामी रहनुभएको छ ।
पुरस्कृत हुने कृषकलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले नगद रु पाँच/पाँच हजारसहित दोसल्ला र कदरपत्रले सम्मान गर्नुभयो । कार्यक्रममा अध्यक्ष सारुले गाउँपालिकाको विकासको आधार कृषि र पर्यटन भएको बताउँदै अब व्यावसायिकतातिर उन्मुख हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
पुरस्कृत हुमीकुमारीले हेफर इन्टरनेशनल नेपालबाट उपहारस्वरुप प्राप्त १० वटा बाख्रा, प्राविधिक सहयोग र घाँसबाट दुई वर्षमै व्यावसायिक बाख्रापालन गरी वार्षिक रु अढाई लाख कमाउन सफल हुनु भएको छ । हुमीकुमारीले बंगुरपालन, माछापालनका साथै समाज सेवासमेत गर्दै आउनुभएको छ ।
← तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर घिमिरेको सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र आलोचना
सिद्धबाबा सडकको विकल्पमा नयाँ सडक बन्ने →
१७ श्रावण २०७५, बिहीबार ०७:१२ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित, यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
९ जेष्ठ २०७५, बुधबार ११:५८ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on अमेरिकी उपन्यासकार फिलिप रथको निधन